သူမအိမ်ကိုပြန်လာရင် အရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲကြိုဆိုမယ့်သူရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိတ်သတ်ကြီးကို ထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ အေးမြတ်သူ – Maythadin
သူမအိမ်ကိုပြန်လာရင် အရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲကြိုဆိုမယ့်သူရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိတ်သတ်ကြီးကို ထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ အေးမြတ်သူ
May Thadin | September 22, 2021 | Celebrity | No Comments
အနုပညာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ အောင်မြင်မှု တစ်နေရာကို ရယူထားနိုင်တဲ့ မင်းသမီးအေးမြတ်သူကတော့ ခုလက်ရှိအချိနိမှာ အပျိုကြီးလို့တောင်တင်စားပြီးခေါ်နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.
မင်းသမီးအေးမြတ်သူတော့ မိန်းကလေးတိုင်းအားကျရလောက်အောင် လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဖြစ်ပြီး သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှန်မှန်ပြုလုပ်နေပုံကိုလည်း သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ပရိသတ်ကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင် တင်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အေးမြတ်သူကတော့ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာလည်း ကျရာနေရာကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ အေးမြတ်သူက မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပက်သက်လို့လည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ
တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့တယ်လို့လည်း ပြည်သူတွေ ကပြောသလို တစ်ချို့ဝေဖန်သူတစ်ချို့ကလည်း စစ်တပ်ဘက်ကို အလှူတွေလုပ်ပြီး ထောက်ခံတယ်လို့လည်း သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သူမကတော့ ဝေဖန်မှုတွေကိုဖြေရှင်းချက်ပေးမလာခဲ့ပါဘူးနော်…
သူမရဲ့တစ်နေ့တာ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ တင်မလာတော့ဘဲ Instagram မှာပဲ တင်လာတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. ဒီနေ့လေးမှာလည်း အေးမြတ်သူက သူမကိုအိမ်ပြန်လာရင် ကြိုသူရှိနေပြီ လို့ရေးသားလာပြီး
သူမချစ်တဲ့ ခွေးလေးနဲ့အတူ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း သူမ ချစ်တဲ့ခွေးလေးက အေးမြတ်သူအမောပြေအောင် ကြိုဆိုပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီး ချစ်ပေးကြပါအုံးနော်..
Credit ; Cele World
အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ေနရာကို ရယူထားနိုင္တဲ့ မင္းသမီးေအးျမတ္သူကေတာ့ ခုလက္ရွိအခ်ိနိမွာ အပ်ိဳႀကီးလို႔ေတာင္တင္စားၿပီးေခၚေနၾကၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.
မင္းသမီးေအးျမတ္သူေတာ့ မိန္းကေလးတိုင္းအားက်ရေလာက္ေအာင္ လွပတဲ့ ခႏၶာကိုယ္အလွကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူ ျဖစ္ၿပီး သူမကိုယ္တိုင္ကလည္း ေလ့က်င့္ခန္းေတြမွန္မွန္ျပဳလုပ္ေနပုံကိုလည္း သူမရဲ႕လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ ပရိသတ္ႀကီးနဲ႕အဆက္အသြယ္မျပတ္ေအာင္ တင္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေအးျမတ္သူကေတာ့ ျမန္မာဇာတ္လမ္းတြဲေတြထဲမွာလည္း က်ရာေနရာကေနပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္နိုင္ၿပီး ခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ေအးျမတ္သူက ျမန္မာနိုင္ငံအေရးနဲ႕ပက္သက္လို႔လည္း ျပည္သူေတြနဲ႕အတူ
တစ္သားတည္းရပ္တည္ခဲ့တယ္လို႔လည္း ျပည္သူေတြ ကေျပာသလို တစ္ခ်ိဳ႕ေဝဖန္သူတစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း စစ္တပ္ဘက္ကို အလႉေတြလုပ္ၿပီး ေထာက္ခံတယ္လို႔လည္း သတင္းေတြထြက္လာခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သူမကေတာ့ ေဝဖန္မႈေတြကိုေျဖရွင္းခ်က္ေပးမလာခဲ့ပါဘူးေနာ္…
သူမရဲ႕တစ္ေန႕တာ လႈပ္ရွားမႈေတြကိုလည္း ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ တင္မလာေတာ့ဘဲ Instagram မွာပဲ တင္လာေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.. ဒီေန႕ေလးမွာလည္း ေအးျမတ္သူက သူမကိုအိမ္ျပန္လာရင္ ႀကိဳသူရွိေနၿပီ လို႔ေရးသားလာၿပီး
သူမခ်စ္တဲ့ ေခြးေလးနဲ႕အတူ ရိုက္ထားတဲ့ ပုံေလးေတြကို တင္ေပးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိတ္သတ္ႀကီးလည္း သူမ ခ်စ္တဲ့ေခြးေလးက ေအးျမတ္သူအေမာေျပေအာင္ ႀကိဳဆိုပုံေလးေတြကိုၾကည့္ၿပီး ခ်စ္ေပးၾကပါအုံးေနာ္..
ဒီကနေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ လူရွှင်တော် ဦးမေတ္တာရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ နောက်ဆုံးစျာပနမြင်ကွင်းပုံရိပ်များ
ကား Accident ဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန် သွားခဲ့တဲ့ မေသစ္စာမောင်
ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံထားရတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို ဂျာမနီရုပ်ရှင်ပွဲတော်က ပေးတဲ့ သရုပ်ဆောင် ထူးချွန်ဆုရွေးချယ်ခံရ
စစ်သင်တန်းတက်နေရှာတဲ့ ဟားငါးကောင်ရဲ့ ဖြစ်သလိုအားဖြည့်တင်းနေတဲ့ တစ်နပ်စာလေး